Momba ny fa maro no tsy mahalala. Eto dia afaka Mampiaraka toerana izay ahafahanao mahita ny mombamomba ny fiainana ny olona rehetra avy amin’ny loharanon-karena.
Rehetra mombamomba ny eto Frantsa. Ary eto no mahatonga.
Ny toerana an-tserasera Niaraka efa ela no miara-miasa. Raha nisoratra anarana miaraka aminay Ianao, dia hahazo ny fidirana amin’ny rehetra ny mombamomba, sy Ny mombamomba azy dia mandeha ho ny banky angona ka dia flash amin’ny toerana hafa. Teny.
Asa Mampiaraka toerana
Miasa nanomboka ny taona. Ny tranonkala ahitana ny rehetra ankehitriny ny endri-javatra: ny tambajotra sosialy (chat), ny fahaiza-milaza ny lohahevitra ho dinihana,»tiana»sy ny fanehoan-kevitra eo ambanin’ny sary, fanomezam-pahasoavana, lalao miaraka amin’ny mpampiasa voasoratra ny fampahafantarana ny mailaka na finday hafatra momba ny vaovao sy ny zavatra ataony. Misy mety rindrambaiko ho an’ny IPhone sy Android. Ianao foana mifandray.
Fanaraha-maso dia ny fanontaniana, izay hasehoko anao izay nitsidika Ny pejy. Izany ankehitriny izay Mampiaraka dia zavatra mahazatra. Misy ny zava-drehetra eto mba hahita ny soulmate, ny raharaha na amin’ny chat.
Actualize mombamomba isam-bolana. Isika dia manaisotra ny bots ary tsy niraharaha ny pejy. Hitady asa rehefa tsotra ny fisoratana anarana